Mayelana Nathi - Guangzhou Longcheng Electronic Co., Ltd.
I-VART VR, etholakala e-Guangzhou, ingenye yezinto zokuqala ezakha izifanisi ze-VR eChina.
I-VART VR inesipiliyoni seminyaka engaphezu kwe-11 embonini ye-VR.
Inkampani yethu ihlanganisa 3000 square metre indawo futhi manje phezu 60 abasebenzi.
Singanikela nge-VR eyodwa noma iphrojekthi yesinema.
Iminyaka engu-20 yesipiliyoni embonini ye-VR
Iminyaka engu-11+ yesipiliyoni ku-VR Theme Park
Yasungulwa ngo-2009, le nkampani yasungulwa nguMnu. Wang Bao Liang, unjiniyela owaziwayo wokuthuthukisa uhlelo lwesoftware, kanye nonjiniyela ababili abajwayelekile bezobuchwepheshe.Njengomunye wabasunguli, uMnu. Wang unesipiliyoni seminyaka engu-20 ekuthuthukisweni kwesistimu yesoftware kanye neminyaka eyi-10 yesipiliyoni kubuchwepheshe be-VR.Ubelokhu ethuthukisa izinkundla eziyinkimbinkimbi zokulawula, eklama ukubonakala okudonsa amehlo, futhi ethuthukisa imidlalo ye-VR ye-premium ngokunamathela emibonweni ehlukene ye-VR, okwenza imikhiqizo yethu ibe ngabaholi bomkhakha.
Sinikeza i-VR Simulator futhi sisize amakhasimende ukuthi avule Ibhizinisi lawo le-VR.Imikhiqizo yethu iklanywe futhi ikhiqizwa ngokwezinga laseYurophu, izinga laseMelika.Futhi yonke imikhiqizo yethu ivunyelwe yi-CE, RoHS, TUV, SGS, SASO.
Sinokuklama okuhle kakhulu, ukuthengisa, ukukhiqiza, ukumaketha, ukufakwa, ithimba langemuva kokuthengisa.Kuthengiswe imishini eminingi yegeyimu ye-VR emhlabeni wonke futhi kunabasebenzeli abaningi emazweni ahlukahlukene.Umshini wethu usetshenziselwa kabanzi ipaki yetimu ye-VR, inxanxathela yezitolo, isikhumulo sezindiza, icinema, isikhungo semidlalo ye-arcade, imnyuziyamu yesayensi, njll.
Ukusekela ngokwezifiso / OEM / ODM.Nikeza ngomdwebo wokufaka, imiyalelo yokufaka.Hlela isifaki ezweni lakini ukuze sikusize uhlanganise i-VR Arcade yakho.Nikeza ngezithombe zezimpahla eziqediwe ukuze uqinisekiswe.
Nikeza ngohlu lokupakisha lokuhlola izimpahla zakho ngaphambi kokuba izimpahla zakho zifike endaweni yakho.Ukusekela ukuhlolwa ngaphambi kokuthunyelwa.Nikeza imanuwali yokuhlolwa kwansuku zonke kanye nempahla yokulungisa ngemva kwevidiyo.
Sinokuklama okuhle kakhulu, ukuthengisa, ukukhiqiza, ukumaketha, ukufakwa, ithimba langemuva kokuthengisa.Iphupho elifanayo lisenza sihlangane, silidlale lifezekile ndawonye.Izinto ezinkulu zingenziwa ngomzamo omkhulu.
Inkampani yethu ihlanganisa 3000 square metres endaweni.
KUNGANI USEBENZA NATHI?
Isisetshenziswa esihle Segeyimu ye-VR kufanele sihehe.Idizayini yemishini yethu yegeyimu ye-VR igcwele izici zobuchwepheshe ezisobala.Ngokusekelwe ekubukeni komkhumbi-mkhathi, umshini onjalo wegeyimu unomqondo oqinile womkhathi wangaphandle.Ngaphezu kwalokho, sithuthukise imikhiqizo embalwa ehamba phambili embonini, njenge-VR Egg Chair kanye ne-VR Flight Simulator edume kakhulu futhi elingiswa izimbangi zethu.
Imidlalo ye-VR egxilile
Ithimba lokuthuthukisa umdlalo lakhiwe ngamalungu ayi-17.Kubandakanya abaqondisi, abahleli bezindaba, abaklami be-3D, abahleli bohlelo, nochwepheshe bomsebenzi.Izindikimba zemidlalo yethu ye-VR zisekelwe kakhulu kuma-roller coasters, izimpi zezinkanyezi, nezimpi zasemkhathini.Ngezithombe ezicacile neziqephu ezithokozisayo, abadlali bangajabulela imidlalo ngokungena shi kuyo.
Mayelana neMechanical Structure
Ukuhamba kwemikhiqizo yethu kusekelwe kumadigri ayisithupha enkundla yokuklama imithetho yenkululeko.Ngedizayini yesakhiwo sama-eksisi ayisithupha, imikhiqizo ingashukumisa ukugxuma kwangaphambili nangemuva, ukuthambekela kwesokunxele nakwesokudla, ukugoqa phezulu naphansi, nokunyakaza okuhlanganisiwe ukuze kuboniswe ngokusobala imizwa enamandla kumamuvi.
Ithimba lethu le-R & D lakhiwe ngabasebenzi abangama-37 abaholwa nguMnu. Wang.Ngokusekelwe kumthamo wethu ovelele we-R & D, sithuthukise ngokuzimela amasistimu wokusebenza anemba okuphezulu kanye nemishini yegeyimu ye-VR yokuhamba isikhathi ebukeka kahle esekelwe ezindabeni zemikhiqizo yethu.Amandla ethu okuthuthuka anamandla, idizayini yokubukeka enhle kakhulu nokuqukethwe komdlalo we-premium kunomthelela eqinisweni lokuthi sikhethwe amakhasimende amaningi.
Ngaphambi nangemuva kokuthenga imikhiqizo yethu, uzothola ukusekelwa kwe-inthanethi kokuthengisa kwangaphambili nangemuva kokuthengisa nosizo olukude ubusuku nemini.Ungenza ama-aphoyintimenti kuwebhusayithi yethu ukuze usitshele isikhathi odinga ngaso ukusekelwa nesevisi enjalo.Futhi sizokunikeza ukusekela okunjalo kanye nenkonzo ngokwezidingo zakho kanye nokuqokwa kwakho.
Siqasha imodeli yenkonzo yamakhasimende engu-2+ 1 VIP ekuqokweni kwethu kwamahora angu-24, okungumthengisi oyedwa + onjiniyela abangu-2 (unjiniyela ongu-1 wezobuchwepheshe + 1 ongunjiniyela wangemva kokuthengisa) ukuze siqinisekise ukuthi noma yiziphi izinkinga zekhasimende zingaxazululwa ngokushesha.
Mayelana Nezinsizakalo Phakathi Nenkathi Yewaranti Yonyaka owodwa
Ngaphambi kokulethwa, sihlinzeka ngezingxenye ezisele ezidingekayo kanye nezingxenye ezigqokwa ngokushesha.Uma kwenzeka noma iyiphi ingxenye inomonakalo wemvelo phakathi nesikhathi sewaranti, sizohlinzeka ngokufaka esikhundleni mahhala.
“Ukudala injabulo namaphupho” ukuletha injabulo kubantu ngokusebenzisa ubuchwepheshe bethu be-VR.
Kuthengiswe imishini eminingi yegeyimu ye-VR emhlabeni wonke futhi kunama-ejenti amaningi emazweni ahlukene.
Siyaziqhenya kakhulu ngokusebenza nabo nokuthola idumela elihle.